स्काउटसी: एक सम्बद्ध स्टोरफ्रन्टको साथ सोशल मिडिया मोनेटाइज गर्नुहोस् Martech Zone
स्काउटसी: एक सम्बद्ध स्टोरफ्रन्टको साथ सोशल मिडिया मोनेटाइज गर्नुहोस्
बिहीबार, अगस्ट 4, 2016 Douglas Karr
स्काउटसी is एक मोबाइल उपकरण जसले कसैलाई पनि उनीहरूको मनपर्दो उत्पादनहरू प्रचार गर्न र इन्स्टाग्राम, फेसबुक र ट्विटरमा दैनिक प्रयोग गरेर पैसा कमाउन अनुमति दिन्छ। प्लेटफर्म पछाडि कार्यविधि धेरै राम्रो छ। स्काउटसीमा आफ्नै स्टोर बनाउनुहोस्, तपाईंको उत्पादनहरू थप्नुहोस्, र मोबाइल अनुप्रयोगले तपाईंलाई ती स्टोरहरूमा अद्यावधिकहरू साझेदारी गर्न सक्षम गर्दछ तपाइँको स्टोरमा उत्पादनको छोटो URL को साथ। यदि उत्पादन पोष्ट मार्फत खरीद गरिएको छ भने, स्काउट्सी प्रयोगकर्ताले बिक्रीबाट एक कमिसन प्राप्त गर्दछ, सामान्यतया खरीद मूल्यको छ देखि दस प्रतिशत बीच।
सामाजिक नेटवर्कमा प्रभावकर्ताहरू द्वारा सबै लक्षित छन् प्रभावशाली नेटवर्कहरू र अन्य बिचौलिया मार्फत एक ब्रान्डको उत्पादनहरु लाई बढावा दिईएको लेनदेन गर्न। स्काउटसीले इन्स्टाग्राममा लाखौं प्रभावकारीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै लेनदेनहरू सहज गर्न सक्षम गर्दछ, व्यक्तिगत रूपमा वा ब्रान्डको साथ। इन्स्टाग्राममा, १०,००० भन्दा बढी अनुयायीहरूको साथ million० लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू छन्। टम Kwon, स्काउटसी को सह-संस्थापक र सीईओ।
स्काउटसी सुविधाहरू समावेश:
शपपेबल इन्स्टाग्राम - तपाइँ इन्स्टाग्राममा के मनपराउनु भएको साझेदारी गर्न जारी राख्नुहोस् र तपाइँ किनमेल गर्न चाहानुहुन्छ छनौट गर्नुहोस्। उत्पादन तस्बिरहरू र ईन्स्टाग्राममा पोष्टहरू अनुयायीहरूलाई स्काउट्सी प्रयोगकर्ताको आफ्नै क्यूरेट गरिएको उत्पादहरूको स्टोरमा, प्रत्येक खरीदको लागि सिधा लि with्कको साथ। जब खरीदहरू गरिन्छ, कमिसन स्काउट्सी प्रयोगकर्ताको पेपैल वा बैंक खातामा हस्तान्तरण हुन्छ।
व्यक्तिगत स्टोरफ्रन्ट - सजीलै क्युरेट गर्नुहोस् र प्रचार गर्नुहोस् जुन तपाईलाई मन पराउनुहुन्छ र दैनिक प्रयोग गर्नुहुन्छ।
लाखौं उत्पादनहरू - हजारौं ब्रान्डबाट उत्पादनहरू छनौट गर्नुहोस् र सजिलै तपाईंको सामाजिक पोस्टमा लिंक गर्नुहोस्। स्काउटसी उत्पाद सूचीले categories००० भन्दा बढी ब्रान्डहरू समावेश गर्दछ, Amazon.com, Rakuten र EBay सहित, सबै कोटीहरूमा लाखौं उत्पादनहरू।
वास्तविक-समय ड्यासबोर्ड - अवलोकन गर्नुहोस् र विश्लेषण गर्नुहोस् तपाईंको किनमेलयोग्य पोष्टहरू र कसरी तपाईंको स्टोरफ्रन्ट प्रदर्शन गर्दछ
Scoutsee अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्!
स्काउटसी ब्रान्ड र एजेन्सीहरूसँग काम गर्दछ भर्तीका लागि अनुकूलन प्रोत्साहन प्याकेजहरू विकास गर्न स्काउट्स र ट्र्याकिंग प्रदर्शनको लागि ड्यासबोर्डहरू प्रदान गर्दछ।
स्काउटसी बीटा-परीक्षण गरीएको थियो र अब स्पार्टन रेस, विश्वको अग्रणी बाधा दौड कम्पनीको साथ आफ्नो साझेदारी सुरु गर्ने योजनामा ​​छ। स्पार्टन रेसले यसको उत्कट प्रभावकारी समुदायको फाइदा उठायो जसले इन्सटाग्राममा स्काउटसे द्वारा संचालित शॉप पोस्टको माध्यमबाट घटना र जीवनशैली उत्पादनहरूलाई उनीहरूको विशाल अनुगमनको लागि प्रमोट गर्‍यो। दरहरू मार्फत क्लिक गर्नुहोस् डबल-अंक वृद्धि र रूपान्तरणहरू उद्योग मापदण्डहरू भन्दा माथिका थिए।
टैग: सम्बद्ध ड्यासबोर्डसंबद्ध मार्केटिङसम्बद्ध नेटवर्कसम्बद्ध स्टोरफ्रन्टअमेजनeBayप्रभावकारी विपणनइन्स्टाग्रामइन्स्टाग्राम शपिंगrakutenस्काउटसीशपपेबल इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया एफिलियट मार्केटिंगटम क्वोन
अगस्ट 16, 2016 बेलुका 7:07 बजे
डगलस, यो साँच्चै राम्रो छ! मैले यो पहिले कहिल्यै सुनेको थिइन तर निश्चित रूपमा यसलाई हेर्दैछु। बाडेको मा धन्यवाद!